Waa Maxay Maansada Soomaaliyeed, Ma Gabay Mise Waa Geeraar? ||Tukesomalism.com |
Dhaqanka, Afka Hooyo, Taariikhda Soomaaliya & DuniddaMaqal & Muuqaal Arrimaha Bulshada
Usama Cismaan — February 11, 2016
Mar haddii aanay qornayn Sugaanta soomaaliyeed, oo aan la helin qoraallo innaga haqabtira qaab-dhismeedka Maansada ama guud ahaanba Suugaanta. La yaabi mayno haddii aynu kala garanweyno Gabay iyo Geeraar, Jiifto iyo Masafo. Intaynaan guda gelin kala duwanaanshaha Maansada, waa maxay Maanso, halkeebay ku aroortaa. Marka hore waxa aynu u adeegsannaa wax kasta oo leh habdhac iyo xaraf la raaco. Haddii aan halkaa ku yara hakado waxa aynu oran karnaa Gabaygu waxa uu ka mid yahay Maansada. Sidaa darteed haddii la yidhaahdo hebel waa Maanso-yahan, macnaheedu ma aha waa Gabayaa. Waxa uu noqon karaa Geeraaryahan. Is weydiintu waxa ay tahay maxaa Maanso kasta loogu magacaabaa Gabay “Inta badan” waxa la odhan karaa gabaygu waa Odayga Maansada.
Next post 10 shay oo Donald Trump uu aaminsan yahay ||Tukesomalism.com
Previous post How to Create a New Business Plan ||Tukesomalism.com